သင် ASSL တွင်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်သည့်အကြောင်းပြချက် (၂၀) ​​ခုကိုသင်လိုအပ်သကဲ့သို့၎င်း - သတင်း
သင် ASSL တွင်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်သည့်အကြောင်းပြချက် (၂၀) ​​ခုကိုသင်လိုအပ်သကဲ့သို့၎င်း
လားရှိုးတိုင်းတွင်နိုးနေသောအချိန်သို့မဟုတ်အပူပိုင်း VK များတွင်ရေချိုးခြင်း၏ထိပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနုပညာနှင့်လူမှုရေးလေ့လာရေးစာကြည့်တိုက် - ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးလေ့လာမှုတွင် ၂: ၁ ကိုရွတ်ဖတ်ကာ 2: 1 ရရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ကောင်းပါတယ်မဟုတ်ဘူး၊ မမျှတဘူး ဒီတော့ဒီနေရာမှာ ASSL ဟာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစာရင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။
WiSi၊ အချိုရည်နှင့်ရေခဲမုန့်များပါ ၀ င်သော 99 Queen Street ရှိ Fusion's ဆိုင်သည်လေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက
1. ဒါဟာဘုရားသခငျ၏စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အဆိုးဝါးဆုံးအဆောက်အ ဦး ပါပဲ
ဤအရာသည်သင်၏ဘ ၀ ၏အကောင်းဆုံးနှစ်များကုန်ဆုံးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောနေရာတစ်ခုနှင့်တူသည်မဟုတ်လော
အဆိုပါ ASSL ဖြစ်စေ 1970 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်ပုံသဏ္isာန်သည်နှင့်စိတ်ခံစားမှုတရားမဝင်ရှိရာအချို့သောကျွန်မရဲ့လက်အောက်ရှိပုံပြင် Post- Apocalyptic ကမ္ဘာမှပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ပထမထပ်မှအပ ASSL သည်ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်မှစပြီးအပင်တစ်ပင်မျှသာရှိသည်။ ပရိဘောဂအားလုံးသည်အင်္ဂလိပ်ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီနှင့်မည်သည့်ခေတ်မီကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကိုမှအောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။ နံရံပေါ်ရှိအင်္ဂတေသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားနှာချေသည့်နှာချေခြင်းဖြင့်လည်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
ASSL အနီးရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပျော့ပြောင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ - မည်သည့်အလှတရားကိုမဆို၎င်း၏ရေဝဲသို့စုပ်ယူသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ASSL ၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိပါက၎င်းကိုမြင်နိုင်သည်၊ အရုပ်ဆိုးသည်။ အတွင်းမှမြင်ကွင်းသည်သင့်အပေါ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ပညာမျှော်စင်၏စိတ်ဆင်းရဲမှုဝေဒနာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဝေးကနေရတဲ့ရှိပါတယ်။
၎င်းသည်အားလုံးသောထိတွေ့နေသောအုတ်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မပြီးဆုံးသေးသော (ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်) သို့မဟုတ်ဆိုးရွားလှသောဆိုဗီယက်မြေအောက်ခန်း (ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိ) အတွင်း၌ပင်ခံစားရသည်။
အပေါ်ထပ်ကိုရောက်ဖို့လှေကားကဘာကြောင့်အရမ်းပင်ပန်းနေတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ASSL ရဲ့သေခြင်းတရားဟာငါတို့ကိုဘ ၀ ထဲနစ်မြှုပ်စေတဲ့ dementor-in-building ပုံစံတစ်ခုလား။
ဒီအိပ်မက်ဆိုးကိုဝေးဝေးရှောင်ပါ။ အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့်ပေါက်ပေါက်နှင့်အတူ 99 Queen Street ရှိ Fusion's ဆိုင်၌သင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။
သင်အမှန်တကယ်စာကြည့်တိုက်၌ထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်, ဒါကြောင့်အဘယျသို့ရှိသနည်း ကျွန်ုပ်၏အိတ်များ၊ ဖိုလ်ဒါများနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်မဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုတွန်းအားပေးရန်မဟုတ်ပါ။ ၂: 1 ကျွန်ုပ်အမေကကျွန်ုပ်ကိုဖိအားပေးနေသည်။
၇ ။ စားပွဲခုံပုံစံသည်သာမန်ထူးဆန်းသည်
အိမ်သာများမှထိုစားပွဲခုံများကိုမျဉ်းဖြောင့်၊ သင်သူတို့သည် loo သို့သွားနေကြောင်းကိုသူတို့သိသည်။ အဆိုးဆုံးလို့သူတို့ထင်ရင်သူတို့အိမ်သာထဲကိုမြန်မြန်ပြေးထွက်သွားရမယ်။
အခြေခံအားဖြင့်သင်အတိတ်ကိုညှစ်လိုက်သောအခါတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပွတ်သပ်ရန်လိုသည်၊ ဘယ်သူက Bumble လိုအပ်ပါသလဲ?!
ကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သာမန်လူသားများမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်ခွက်ဘောပင်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါဖန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သာအကြောင်းကိုသုံးပေအမြင့်သည်ဒါကြောင့်သူတို့ပြုသမျှသူတို့လိုက်တယ်ပျင်းစရာတိရစ္ဆာန်ရုံ၌နေတူသောသူတို့ကိုပုံရသည်။
Fusion ရဲ့ S ၉၉ ဘုရင်မလမ်းရှိ hop သည်အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အနားယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ မတ် ၈ ရက်တွင်သူတို့၏ဖွင့်ပွဲကိုစစ်ဆေးပါ
၁၀။ သင်၏ ID ကဒ်ကိုသင်မေ့သွားသောအခါဖြစ်ပျက်သောအဓိပ္ပါယ်မဲ့မှု
Wales ရှိအဆိုးဝါးဆုံးအဆောက်အအုံထဲသို့ဝင်ရန်နှင့်သင်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေ၊ မသေသည်ဖြစ်စေဂရုမစိုက်သည့်တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်သင့်အားဘာမျှမဖြစ်စေရပါ။
ASSL သည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီးယင်းကိုလျှပ်စစ်မတီထွင်မီကတည်ဆောက်ခဲ့ပုံရသည်၊ လူတိုင်းသည်သူတို့၏စာတမ်းများကိုလက်ဖြင့်ရေးသားပြီး Snapchats အစားသယ်ဆောင်သောခိုများကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူး - ဒါကရေခဲသေတ္တာထဲမှာနေတာလား၊
၁၃ ။ ဖန်သားပြင်ဖြင့်အုပ်စုလိုက်လေ့လာသည့်အခန်းများသည်သင့်အားစာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးနှင့်ထိတွေ့စေသည်
ကြောက်ရွံ့မှုမရှိပါနှင့် - စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးမှမကြည့်မိဘဲသင်၏အဖွဲ့လိုက်စီမံကိန်းကိုလုပ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် 99 Queen Street ရှိ Fusion's ဆိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဆယ့်ငါး သင်၏ပစ္စည်းများကိုငါးစက္ကန့်မကြည့်ဘဲ ထား၍ မရပါ
လူနာလေးယောက်နဲ့အလွယ်တကူကိုက်ညီနိုင်တဲ့စားပွဲကြီးကြီးတစ်ခုပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမံကိန်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော! ဒါမှမဟုတ် Angus အတွက်သူ့ရဲ့ပရိုတင်းသန်း ၂၀ ကိုတန်းစီပေးဖို့သူ့ရဲ့ flip-flops, shorts နဲ့ rugby hoodie အတွက်အကောင်းဆုံးပါ။ မင်းကြိုက်တဲ့လူတွေဟာငါကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အကြောင်းအရင်းပဲ။
၉၉ Queen Street လမ်းရှိ Fusion's ဆိုင်၌သင်လိုအပ်သောနေရာအားလုံးအခမဲ့ WiFi၊ မုန်လာဥနီ၊ အချိုရည်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုများရှိပါစေ။
သင်နှင့်ငါနှစ် ဦး စလုံး fella
အနည်းဆုံးပြတင်းပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖန်ထည်တစ်ခုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲအက်ခြင်းကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အစက်အပြောက်များရှိနေသည်။ ရှစ်စက္ကန့်ကျော် ASSL တွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်မည်သူမဆိုနံရံများကိုကြောက်။ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေလိမ့်မည်။
သူတို့ကတောင်မှတောင်မျက်တောင်ခတ်သူမည်သူမဆို shush, ပါဝါခရီးစဉ်အပေါ်နေပေမယ့်ပျော်ရွှင်စွာတစ် ဦး အံ့သြလောက်အောင်ကျယ်သောမိခင်၏အစည်းအဝေးရပါလိမ့်မယ်။ သင်စာအုပ်တစ်အုပ်ရှာရန်လိုအပ်သည်ကိုဘုရားသခင်ခွင့်မပြုပါ၊
၁၉ ။ နံနေပြီ
ကြည့်ရတာအပြင် ASSL ပါ အနံ့ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဲ့သို့ - ရှေးဟောင်း၊ စိုစွတ်သောစာအုပ်များ၊ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောပရိဘောဂများနှင့်ကော်ဇောများနှင့်ချွေးများတို့သည် mince ကိုအဓိကအစားအစာအုပ်စုဖြစ်သည့်အချိန်သို့ပြန်ပို့ရန်လုံလောက်သည်။
ရင်ဆိုင်ကြရအောင် - ASSL သည်ကာဒစ်ဖ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အဆိုးရွားဆုံးနေရာဖြစ်သော်လည်း ၉၉ ဘုရင်မလမ်းရှိ Fusion ဆိုင်၌ Eclipse တွင်နေထိုင်သူအားလုံးနှင့်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များသည်ထိုလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်
မတ်လ ၈ ရက်နေ့ Fusion ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ DJ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ သောက်စရာများနှင့်ပုလင်းယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ပေါင် ၁၀၀ အနိုင်ရမည့်အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် 99 Queen Street မှာ Fusion ရဲ့ Cardiff ဆိုင်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ